अनमोल ११ नम्बरअको जर्सिलाएर फूटबल खेल्दैछन् ?
अनमोल केसी स्टारर चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को आजदेखि सुटिङ सुरु हुँदैछ । इलाममा जारी माइभ्याली फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलअघि ‘क्याप्टेन’ को छायाँकन हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ । यस चलचित्र फुटबल खेलकै वरपर घु...
फ्नो अनुहार अर्कैसंग मिलेपछी बिजोग l नक्क्कलीले बिताए हिराको श्रीमतीसम्म बर्षौसम्म रात (भिडियो)-
हामी सबै जान्दछौं कि हामीसँग संसारभरि7समान अनुहारहरू छन्। यस भिडीयोमा हामी बगाङ जिल्लामा बिभिन्न घटना देखापर्यो। हिरा कामी नामक एक जना पुरुषले पनि यस्तै अनुहार छ र यसको खर्च उनको बुरी तरिकाले झरेको छ। यो विचि...
सप्तरी । सँगै जीउने सँगै मर्ने कसम खाएका श्रीमानले कहिल्यै माया गरेनन् । न त सासू-ससुराकै माया पाइन् । माइती घरमा त राम्रोसँग हुर्कनसमेत नपाई अन्माइएकी उनले श्रीमानको घरमा दासीको जीवन बिताइन् । पिरलो यतिसम्म...
१७ वैशाख, कास्की। सार्वजनिक जग्गा माफियाले व्यक्तिको नाममा बनाएका घटनाहरु त सुनिए, देखिएकै हो । तर माफियाले अब जमिनमुनिको जग्गामा समेत कब्जा जमाउन थालेका छन् । सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर फेवातालमु...
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल त्यसैगरी युटुवहरुमा भाइरल बनिरहेकी काभ्रे नबोबुद्ध नगरपालीका खरीबोटकी बालगायिका हुन् प्रयुसा न्यौपाने । सानो उमेरमा नै निकै अदभूत गायन क्षमताका भएकै कारण, छोटो समयमा नै उनी चर्चामा शि...
१७ वैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको कोटिहवाका रोहन थापा भारतीय टेलिभिजन जि टिभिबाट प्रसारण हुने चर्चित डान्स रियालिटी शो ‘डिआईडी लिटिल मास्टर्स सिजन-४’ को टप ८ मा पुगेका छन् । भारतका दुई लाख भन्दा बढी प्रतियोगीमाझ...
प्रदिप र परमिताको जोडी पर्दामा
नायक प्रदिप खड्काले नायिका पूजा शर्मा, अश्लेषा ठकुरी र जसिता गुरुङसँग पर्दामा रोमान्स गरिसकेका छन् । चलकेटी नायक प्रदिपले लभ स्टोरी चलचित्रमा नै आफूलाई भिजाइरहेका छन् । उनै, प्रदिप अब नयाँ चलचित्र ‘रोजी’मा क...
म काम देउ भन्दै कसैसँग हात जोड्दिन: मरिष्का पोख्रेल(भिडियो कुराकानी)
नायिका मरिष्का पोख्रेल अहिले फेरिएकी छिन् । म्यूजिक भिडियोमा काम गर्दा हट देखिने गरेकी उनले चलचित्रको पर्दामा आफूलाई सफ्ट रुपमा ढालेकी छिन् । मरिष्का अभिनित नयाँ चलचित्र ‘लम्फू’ वैशाख २८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ ...
आश्माको यो डान्स, भाइरल भैरहेको छ । बबाल नाचिन् नी ।
नेपालको चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रुज’ कि डान्सर आश्मा विश्वकर्माको ‘डामे तु कोसिता’ च्यालेन्ज भिडियो विश्वभरका दर्शकले मन पराएका छन् । यूट्यूवमा अपलोड भएको २० दिनभित्रै यो भिडियोले एक करोडभन्दा बढि भ्यूज प...
सुधार गृहमा उपचार गराउँदै कपिल शर्मा !
शाहरुख खानसँगको झगडापछि बलिउडका र्याप किंग हनी सिंहलाई डिप्रेशन भएको थियो। र, त्यसपछि हनी सिंह अचानक बलिउडबाट गायब भए। निकै समयपछि हनी सिंह रिह्याब सेन्टरमा उपचार गराइरहेको समाचार सार्वजनिक भयो। यतिबेला कमेडी क...